DF oo dhaawacyadii Wisil uqaadday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo dhaawacyadii Wisil uqaadday Muqdisho
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa galabtay diyaarad uga soo qaadday magaalada Gaalkacyo dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay degaanka Wisil ee gobolka Mudug.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kudhawaad 15 qof oo ku dhaawacmay degaanka Wisil ayaa galabta loo qaaday magaalada Muqdisho, kadib markii diyaarad khaas ah looga soo diray caasimada dalka ee Muqdisho.
Dhaawacyadaan ayaa laga qaadey Garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo, waxaana dadkii dhaawacyada ambabixiye ka mid ahaa Wasiir ku Xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
Degaanka Wisil ayaa waxaa dagaal qaraxyo ku billowday kusoo qaaday dagaalyahannada Al-Shabaab, waxaana halkaasi lagu dilay qaar kamida ciidamadii dowladda Soomaaliya ee dagaalka kala hortagay iyo dadkii shacabka ahaa ee degganaa degaanka Wisil ee gobolka Mudug.
Dhaawacyada galabtay loo qaaday magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwo xaaladdooda caafimaad ay liidato, waxayna isugu jireen dad shacab ah iyo ciidankii dagaallamayay, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadday ay isaga carareen degaanka ay weerarka kusoo qaadeen iyagoo markii ay baxayeen miino ku aasay waddada dhinaceeda, taasoo ay ku qaraxday dadkii iyo ciidankii ceersanayay haraadiga kooxda weerarka soo qaaday oo si dirqi ah uga baxsadah halkaasi.